Iintlobo zokuthiywa kwamagama kunye nokuba yintoni na - i-Creativos Online | Creatives Online
UMary Rose | | ngokubanzi, Ukuphefumlelwa
Igama ngu un Ngcamangoo que Ukunyuka a inxalenyeir de la neEziinto de difUErenciar e iifayileukubaar una nueva empuhambo del kuphumlao, y es un proEzio que efunekayoizolo de kakhuluo tohpo y esfewezo. Usenokungazi ukuba kukho iintlobo ezininzi zokuthiywa kwamagama, kwaye oko kuxhomekeke kwinto ofuna ukuyibonisa ngebrand yakho. Kufuneka ukhethe enye okanye enye. Ungakhathazeki, kule posi, sichaza iintlobo zamagama ezikhoyo.
1 Yintoni ukuthiywa?
2 Ulenza njani igama?
3 Iintlobo zamagama
3.1 Ukunikwa Kwamagama Okuchazayo
3.2 Ukunikwa amagama
3.3 Ukunikwa kwamagama jikelele
3.6 Igama lomseki
El amagama Yinkqubo yokuphuhlisa igama le-brand. por medio de enye proEzio se ibhasica un nombre que Ulwandle inkcazondiye e, Ngaphandlendiye e, atractndiye e, sen senchayi, fáeyelash de isenziunciar, que Ulwandle de fáeyelash irekhodiAngleivuliwe y que ademI-ás iifayileifIntoni a la umtshatoca.
Wazalwa njenge fuerte kuyaphelaintlaka en el isifohayi de imvelisoo de umtshatoca, tanto en imvelisoos fíSicos como en inkonzoiOS. Ukuthiya yinkqubo yokuvelisa uphawu olunegama kunye nomfanekiso ogqithisa amaxabiso kwaye unike amava ohlobo olulodwa.. Las umtshatoCAS unyana el bonaíimpunduo for el Ukufaka uphawu. Ngoko ke branding es la imoa en que una umtshatoca se ikhampasiokanyea, se vemsebenzini, se ukuthumelauhambo, se comunmna CA y se bazalwanaackwaye yena nge sus tyaidimithandazo.
Ulenza njani igama?
Lo sebenzi se inicia nge un uhlalutyo lwemarike, abakhuphisana kunye nenkampani ngokwayo, y se debe de yeneneizar nge la inxaxhebaAngleivuliwe de ingcalios en nombres. Debes de tener en cungaphakathi izinto ezahlukeneyo:
Nombre debe de ukuba sen senchayi
Fáeyelash de isenziunciar
Faeyelash de irekhodiar
Fáeyelash de escubamboir
ukuba hayi Ulwandle confuso ni genere iingxabanoia
Ni que iqukauya imfumbaabi-ras o síumthios que hayi hagan inxalenyee de la iifayileinto de la empuhambo
UAdamI-ás, debe ilungele ukuma kwenkampani, kunye nemarike ekujoliswe kuyo, kunye nomfanekiso efuna ukuveza kunye nenyani. ngokwenene. PAra nombrar una umtshatoca, uhlaza que ibhasiimoto un nombre que se adecúe, en su dolophu inxalenyee, a las imotoumdlaliíistikias de la empuhambo.
A abantuithanga se Iluncedoiza una ukudibanisainAngleivuliwe de variOS nombres comerintoes for EstunakhoOfficer una umtshatoca, aunque la ukudibanisainAngleivuliwe debe ukuba lo sufmnandingokuqinisekileyoe interesngaphambili como for irekhodiarla.
Ukunikwa Kwamagama Okuchazayo
Un amagama inkcazondiye e es un nombre que ichaza imveliso, inkonzo okanye uphawu. Eisiqa nombre es mI-ás ebalulekileyoe que un nombre de umtshatoca ya que tiene que chazair qué es o qué hi-eyisi el imvelisookanye. Umzekelo: Telefónica.
Un amagama eqikelelwayoo es una unxulumano phakathi kwegama lekhonkrithi kunye nesalathiso esingabonakaliyo a oiTro nombre. Ndithetha ukuthi, zenziwe ngamagama. Ukuze bangadityaniswa nelinye igama. Njengomzekelo: Kodak.
Ukunikwa kwamagama jikelele
Un nombre genésisityebio es un nombre que ichaza uphawu olufanayo a variOS imvelisoos, inkonzoiOS o umtshatoCAS. El nombre genésisityebio hayi es único y hayi se puede ibhalisiwerar. Umzekelo: Danone.
Un acrivuliweimo es una Igama elenziwe ngoonobumba belinye igama okanye ngamagama aliqela y que kuthethaa una ilangaa imfumbaabra, y se escunxweme en una ilangaa imfumbaabra. El acrivuliweimo es muy Iluncedoizkokuchitha for nombrar ilunguizisenzoes, izikouciones o emcinezelaas, y tzombiniikwi se Iluncedoiza en las ihleloisenzoes de las ciudintando. Njenge-UN (Umbutho weZizwe eziManyeneyo) okanye i-IBM (oomatshini boShishino baMazwe ngaMazwe).
Olu hlobo lwamagama lubhekisa kwigama lebhrendi ku a ireferensi kwindawo yayo okanye indawo yempembelelo. Umzekelo: Estrella Galicia okanye iBanco Santander.
Ngokusisiseko ibhekisa ekusebenziseni eyakho igama lokuqala okanye lokugqibela lomntu owaseka inkampani. Xa olu hlobo lwamagama lusetyenziswa, uphawu luzuza udumo kunye nokuthembeka. Okwangoku isetyenziswa kancinci. Umzekelo: Esteé Lauder, Agatha Ruiz de la Prada, Disney okanye Lacoste.
Igama elitsha lakhiwe ngamanye amagama asele ekhona, afana nala: Movistar, owazalelwa kumanyano lweMóvil kunye neStar.
Ekugqibeleni, ukuze ibhrendi, imveliso okanye inkonzo yakho ibonwe kwaye ibe negama elihle. Kufuneka uchithe ixesha elininzi kwinkqubo yokudala, ekubeni inxalenye yempumelelo yenkampani iya kuxhomekeka kuyo. Ngoku ukuba uyazazi iintlobo zamagama ezikhoyo, uyazi ukuba umntu ngamnye unokunikela ngantoni. Ukuba awuyongcali kule ndawo, ungasoloko usebenzisa ingcali, ukukukhokela kwinkqubo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » Iintlobo zamagama
Hlaziya iileya kwiPhotoshop
Uyenza njani i-gif kwi-GIMP